१५ औ विश्व आदिवासी दिवसले उब्जाएका प्रशंगहरु
Home मत / मतान्तर १५ औ विश्व आदिवासी दिवसले उब्जाएका प्रशंगहरु
-ईन्द्र एलजी थापामगर
गत अगष्ट ९ तारिख नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङको आयोजनामा ’१५ औ विश्व आदिवासी दिवस’ भव्यरुपमा मनाएको झण्डै ४ हप्ता बितिसकेको छ तर मलाई उक्त दिनको सम्झना ताजै छ। यसैले त्यस सन्दर्भवमा केहि लेख्न गैरहेको छु। त्यो दिन मलाई सानो नेपालको सम्झना गरायो। पूर्व देखि पश्चिम सम्मका नेपाली आदिवासी जनजातिहरु एउटै स्थानमा भेला भएर हामी नेपाल देशका आदिवासी हौ भनेर कुर्ले। देश भित्रको कुरा नगरौ। प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गरिएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालका संस्थापक महासचिव तथा एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा सभासद सुरेश आले मगरले सभालाई जातिमय बनाइदिए। म त्यसउपर टिकाटिप्णी गर्न चाहन्न। यसवेला यो पनि एउटा राजनितिक विषय बनेको छ। राजनितिक विषय प्रति मेरो खासैरुचि छैन आजकल।
म कहिले काहि लेख्दा भावना बग्ने गर्दछु। भावनामा बग्दा विषय र प्रशंगहरु ड्रीरेल भएका हुन्छन र पनि लेखिदिन्छु। गर्लस गाइड होस्टेलको सभाकक्ष नेपाली आदिवासी जनजातिमय भएको थियो। आफ्नो पहिचान दिने जातिय पहिरन, जाति विशेषका नृत्यहरु प्रस्तुत गरेर सिङगो नेपालको प्रतिनिधित्व भएको भान हुन्थ्यो। यी नेपाली मनहरु सधै सधै यसरी नै बगिरहोस जताततै कहिकतै खालीहुनुहुदैन। निकट भविष्यमा नयाँ नेपालको नयाँ संविधान नेपाली जनताको लागि आउदैछ। निश्चय नै नेपालको वर्तमान राजनैतिक भूगोल परिवर्तन हुनेछ। यधपि नेपालीहरुको नेपालीत्वको भावनाहरुमा परिवर्तन हुनुहुदैन। देशभित्र थुप्प्रै संघिय राज्यहरु बन्नलान तथापि नेपालीत्व उर्वर मनहरु विभाजित वा खण्डित हुनुहुदैन। कम्तिमा ‌औसत नेपालीहरुको यहि चाहिरहेका छन्।
विगतले हामीलाई प्रमाणित गरेको छ । विदेशमा रहेका हामीहरु संसारको जुनसुकै ठाँउमा रहे पनि नेपालीलाई परेको चोट आफूलाई परेको अनुभव गरेका छौ। इराकमा हत्या भएका नेपालीहरु प्रति उर्लेको आक्रोसहरु, डोल्मा उपर मृत्यु दण्डको सजार उपर नेपाली मनहरु सबैतिर जहातहि आफ्ने सम्झेर देखाएको कदमहरु, केहि महिना पहिले हङकङमा दिल बहादूर लिम्बुको हत्याको विरोधमा हङकङेली नेपालीहरुले उर्लेर प्रर्दशन गरेको ऐक्यवद्वता अनि देश भित्र आइपर्ने हरेक दैविक तथा अन्य समस्याहरु प्रति उर्लने यी नेपाली मनहरु सनातनरुपमा चलिरहनु पर्छ।
भन्न मन लाग्यो, सामान्यत वाद उपयोगि नै हुन्छन् तर जब वाद अतिवाद हुन थाल्छ त्यसबेला सामान्य नियम भित्र यो बस्दैन। आफ्नोबारे कुरा गरीरहदा अरुकोबारे पनि कुराहरु सुन्ने गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा संसारमा सबै भन्दा संवेदनशिलरुपमा जाति र धर्मलाई लिन सकिन्छ। अहिले सम्म संसारमा सबै भन्दा बढि हत्या र हिंसा यसैमा भएको छ र भैरहेको पनि छ। यसैले यस्ता विषयहरुमा हामीले क्षणिक लाभमा यसको संवेदनशिलतालाई बुझ्न सकेनौ भने त्यो आफैलाई आत्मघाति हुनसक्छ।
म सोचिरहेको छु, जातिय मिलमिलाप तथा धार्मिक सहिष्णुताको हिसाबले नेपाल संसारमै अनुपम उदाहरण भैआएको छ । यसमा हामी गौरव गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो विशेषता पनि हो। कतै एउटा जातिको हक र अधिकार र पहिचान खोजिरहदा अर्को जातिको तपशीलका हनन् नहोस्। साच्चै मलाई लतरम्म फलेर पहेलपुर भएको सुन्तलाको बगैचा भन्दा सयौ विजातिय फलफूलले भरिएको बगैचा सुन्दर र आनन्ददायक लाग्छ। यसैले नेपाल एउटा वहुजाति, वहुभाषिक, वहुधार्मिक तथा वहुसाँस्कर्तिकयुक्त देश नेपाल सबैको साझा फूलबारी हो यधपि आजकल हामीहरु क्रमश आवश्यकता भन्दा बढी संकुचित भैरहेका छौ। एउटा उदाहरण लिउ परमानन्द झाले उपराष्ट्रपति पदको सपथ नेपालीमा भाषामा खादाँ के विग्रन्थ्यो ? हिजो झण्डै ३५ वर्षसम्म नेपाली भाषामा वोकालत गर्दै न्यायधिस भएर नेपाल र नेपालीलाई सेवा गरेका आज किन क्षेत्र, जाति वा भाषा विशेषमा खुम्चिए ? कम्तिमा उपराष्ट्रपतिले दल, क्षेत्र, जाति र भाषाको घेराभन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपालीको मात्र हुँ भन्न उनलाई केले रोक्यो ? प्रशंग बढि नकोट्याउ।
भोलि जातिय आधारमा संघिय राज्यहरु बने पनि मगराँत राज्यमा नाचिने कौरा लिम्बुवान राज्यमा रहेका मगरहरुले नाँच्न पाउने छन् वा किरात राज्यमा नाचिने साकेला सिलि नेवाँ राज्यमा रहेका राईहरुबाट देख्न पाइने छ आदि/ईत्यादि र यसरी नै आगामि विश्व आदिवासी दिवसहरु देशविदेश सबैतिर सबै आदिवासी जनजातिहरु एउटै मञ्चमा उभिएर विभितामा एकताको प्रतिक बनेर देखाउने छन्। यस्तै सोच र विचारहरु उब्जीरहेका छन् यसबेला तथापि वर्तमान कठोर बन्दै गैरहेको आभाषा हुन्छ।
अन्तमा, हङकङमा अब आउने १६ औ विश्व आदिवासी दिवस यसरी बन्द कोठामा होइन खुला आकासमा मंकिहिल वा ताई मो सन् वा कहि उपयुक्त ठाँउमा मनाउनु पर्छ। दिवसलाई दिवस मात्र नमानेर हङकङेली नेपालीहरुको भेटघाट तथा भलाकुसारी गर्ने उत्सवको रुपमा विकास गर्दै लग्नु पर्दछ। कम्तिमा यसवेला यस किसिमको कार्य गर्न सक्ने अन्य संघसंस्थाहरु नदेखिएकोले नेपाल जनजाति महासंघ, हङकङले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
The deadly job of protecting DR Congo's Virunga National Park